10 Waxyaabood Oo Nin Walba Uu Ka Ogaado Naqshadeynta Gudaha | Ragga Stylish
Waxaa jira bohol weyn oo udhaxeysa haysashada gurigaaga a arday jaamacadeed (Erasmus kiiska ugu xun) ugu dambayntiina waxaad dhistaa boos kuu gaar ah nin weynaaday. Waxaad joogtaa meel muhiim ah oo aad ka fiirsaneyso dib u naqshadaynta booskaaga laakiin way adkaan kartaa in la helo barta muhiimka ah ee qaab weyn iyada oo aan laga dhigin geeska ama gurigaaga oo ah nuqul sax ah ee aagga bandhigga Ikea. Sidaa darteed, haddii aad ka fekereyso inaad taabasho siiso qurxinta gurigaaga, adoo qiraya in boodhadhka Pamela Anderson uu durbaba wax yar huruud yahay (Pamela ha noolaato!) Waxaan ku siinayaa adiga toban fure inaad tixgeliso si aad u abuurto booskaaga quruxda badan isla markaana aad u hagaajiso qurxinta gurigaaga.
1. Isku darka wax walba waa hagaagsan yihiin, waa badan yihiin waan ku talinayaa.
Qolku waa inuu siiyaa dareenka guriyaynta ururinta, oo aan lagu qurxin ujeeddadaas keliya, in lagu qurxiyo ahaanshaheeda. Waa inaad iska ilaalisaa in gurigaagu u eg yahay buug-yare, maxaa yeelay iskudhafka walxaha ka imanaya meelo kala duwan, samee isku-duub adiga kuu gaar ah.
2. Waxyaabaha qaar ayaa jira oo kaliya si loo muujiyo.
Guud ahaan, rag badan ayaa wax u iibsada waxtarkooda iyo isticmaalkooda - runti waa caado wanaagsan qurxinta mooyee. Dabcan waxaad u baahan tahay kuraas aad ku fariisato iyo miis aad ku cuntid laakiin u adeegsiga sharcigaas gurigaaga oo dhan waxay umuuqaneysaa mid madhan. Kudar walxo yaryar oo qurxin ah, farshaxanno, ubaxyo, makiinad duug ah (inkasta oo aysan waligeed la tartami karin MacBook-gaaga) ama xitaa laan. Wax kasta oo aad aragto oo sifiican ugu socda goobtaas oo aad adigu naftaada aad ugu raaxeysan karto wixii hadda ka dambeeya.
3. Ku dar wax duug ah
Xitaa haddii aadan jeclayn waxyaabaha qadiimiga ah ama erayga "guridda" waa lagu daalayaa, ku dar dhowr shay oo la isticmaalay oo gurigaaga u keenaya muuqaal shakhsi ah. Raadi walxaha ku noolaa qoyskaaga muddo tobanaan sano ah, kuwaas oo ku dari doona taabasho melancholic ah si aad ugu faanto gurigaaga.
4. Si taxaddar leh uga fikir xulashada rooggaaga
Aagga uu rooggu ku yaallo waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee aan eegno markaan qol galno. Tayada ugu fiican uguna asalka badan waxay u egtahay inay leedahay qiimo aad u sareeya. Sidaa darteed, waxaan kugu martiqaadayaa inaad dib uga fiirsato oo aad u jeclaato mid kula jira sannado badan. Tan iyo markii aad samaynaysid maalgashigaas, raadi asalka oo u isticmaal salligaaga si aad ugu darto taabashada midabka qolka.
5. Dharka fadhigaaga
Sariirtu waa mid ka mid ah waxyaabahaas yar ee aan u arko inay tahay inaad mudnaanta ka siiso raaxada naqshadeynta. Haddii fadhigaagu yahay mid raaxo leh laakiin aan lahayn wax dhadhan ah, ku dabool buste fiican ama ku buuxi barkimooyin asal ah oo qurux badan. Ha ilaawin inay iibinayaan daboolida moodooyinka kala duwan ee aad xilli kasta ku yeelan doonto fadhiga kaladuwan.
6. Ku daadi lacagtaada kursi fiican
Haddii aad runtii ka fekereyso inaad qarashgareyso qadar lacag ah, ha ka waaban inaad ku bixiso waxa noqon doona "carshigaaga". In kasta oo fadhigaagu waxyar yahay oo asal ahaan ka maqan yahay, kursigu waa fursad lagu jebiyo halabuurka oo taabashada oo dhan loo siiyo taabasho muuqaal leh. Maalgeli tayada iyo naqshadeynta, indhaha dadku waxay aadayaan goobtaada cusub ee la ururin karo.
7. Miis qaxwo dhig
Haa haa, waa wax iska cad laakiin dad badan ayaa dhigay miisas kafee ah oo loogu talagalay in lagu turunturoodo habeenkii. Miiskaasi ha noqdo wax kale adoo ku daraya moodooyinka ama joornaalada naqshadaha ka tarjumaya dhadhankaaga iyo aqoontaada. Buugag is dul dhig oo ku dar qaar ka mid ah walxahaas qurxinta leh ee aan horay uga soo hadalnay.
8. Ku faana inaad haysato gole baar
In kasta oo aad u badan tahay inaad rabto inaad qariso dhalooyinkaaga ugu fiican munaasabadaha waaweyn, barxad-bannaan waa qasab in lagu qurxiyo. Gawaarida baararka, kabadhka baarka ama ugu yaraan saxaarad xarrago leh oo leh alaab wanaagsan ayaa ku filan. Sidoo kale ku dar xoogaa muraayado wanaagsan oo ah whiskey iyo dhalooyin khamri ah oo wanaagsan oo dharkaaguna wuu fiicnaan doonaa.
9. Iibso farshaxan xalaal ah
Kooxdaada ama boorarka filimku ma aha farshaxan. Farshaxanka wanaagsan waa astaanta dhabta ah ee qaan-gaadhnimada ee aan kaaga baahnayn inaad tagto iibsashada Picasso ama Velázquez ama aad ku qarash gareyso milyaneer dhab ah. Daabacadaha ama lithographs-ku waa bar bilow wanaagsan ee ururintaada.
10. Ku dar cagaar gurigaaga
Xitaa haddii aadan jeclayn dhirta, haddii aadan geranium uga sheegi karin hydrangea, in yar oo cagaar ah ayaa kaa caawin doonta jebinta khadadka booska oo dhalaalaya qol. Haddii aad musiibo ku tahay noole kasta, kaktekus wuxuu noqon doonaa saaxiibkaaga ugu fiican, xitaa uma baahna inaad fiiriso.
Raadi waxyoonay (haa, Pinterest ayaa noloshayda baabiisay), geesinimo oo maal gasho waqti yar iyo lacag si aad u siiso gurigaaga taabasho asal ah oo qaan gaar ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » 10 arimood nin kastaa waa inuu ka ogaadaa naqshada gudaha
H&M wuxuu yareeyaa jaakadiisa 50% sidaa darteed qabow kuma qaboobi doono jiilaalkaan